Halyeey Atletico Madrid ah oo sheegay in Barcelona ay ku qaldantay iibinta Luis Suarez – Gool FM
Dajiye March 5, 2021
(Madrid) 05 Maarso 2021. Xiddigii hore ee Atletico Madrid ee Diego Forlán, ayaa sheegay in Barcelona ay qalad ku gashay inay u ogolaato inuu baxo xiddigiisii ​​hore ee Luis Suarez.
Xiddiga reer Uruguay ee Luis Suarez ayaa ka tagay kooxda Barcelona xagaagii la soo dhaafay isaga oo ugu biiray kooxda Atlético Madrid heshiis ku kacay kaliya 2.5 million.
Xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee uu la qaatay Atletico Madrid, Luis Suarez wuxuu soo bandhigayaa heerar kala duwan oo aad u wanaagsan, isagoo u dhaliyey 16 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 2 gool kale, kaddib 26 kulan uu kala qeyb qaatay ilaa iyo haatan.
Diego Forlan ayaa la hadlay wakaaladda wararka France-Presse, wuxuuna yiri:
“Ka tagista Luis Suarez ee kooxda Barcelona? dabcan waxay ahayd qalad weyn, kaddib markii aan ogaaday in Barca ay soo bandhigtay inay iibkiisa, waxaan gartay inay khalad ahayd. “
Waxa kaliya ee aan ogahay ayaa ah inaysan ku xirneyn waxqabadkiisa garoonka.”
“Waan u qoray isaga oo waxaan ku iri,” Dhageyso, adigu ma tihid kii ugu horreeyey mana kii ugu dambeeyay, waa inaad sidaada ahaataa uma baahnid inaad cid wax u caddeyso, sidaas darteed sii wad inaad sidaas oo kale ku sameeyso Atletico Madrid.”
“Barcelona waxay lumisay Luis Suarez, waxay ahayd wax la mid ah markii uu Cristiano Ronaldo ka tagay Real Madrid.”